4. Ukubaluleka Komsebenzi KaNkulunkulu Wokuvivinya Nokucwenga | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Yisiphi isimo ngaphakathi kubantu, lezi zilingo eziqondiswe kuso? Ziqondiswe esimweni esihlubukayo kubantu esingakwazi ukwanelisa uNkulunkulu. Kuningi okungekho msulwa kubantu, futhi kuningi ukuzenzisa, ngakho uNkulunkulu ubafaka ezilingweni ukuze abahlambulule. …
Uma ungasazi isimo sikaNkulunkulu, nakanjani uyowa ngesikhathi sezivivinyo, ngoba awazi ukuthi uNkulunkulu ubaphelelisa kanjani abantu, nokuthi usebenzisa ziphi izindlela ukuze abaphelelise abantu, futhi uma izivivinyo zikaNkulunkulu zikufikela futhi zingahambisani nemibono yakho, ngeke ukwazi ukuma uqine. Uthando lukaNkulunkulu lweqiniso, yisimo sakhe sisonke, futhi uma isimo sikaNkulunkulu sivezwa kubantu, lokhu kulethani enyameni yakho? Uma isimo esilungile sikaNkulunkulu sivezwa kubantu, inyama yabo ngokungenakugwemeka iyozwa ubuhlungu obukhulu. Uma ungabuzwa lobu hlungu, ngeke uze upheleliswe nguNkulunkulu, futhi ngeke ukwazi ukunikela uthando lweqiniso kuNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ekuphelelisa, uzokukhombisa isimo Sakhe sisonke. Kusukela esikhathini sokudala kuze kube namuhla, uNkulunkulu akakaze akhombise isimo Sakhe sisonke kumuntu—kodwa ngezinsuku zokugcina uyasiveza kuleli qembu labantu abamisele phambilini futhi wabakhetha, futhi ngokuphelelisa abantu uveza obala izimo Zakhe, ngalokho wenza iqembu labantu liphelele. Lunjalo uthando lweqiniso lukaNkulunkulu lwabantu. Ukuzwa uthando lweqiniso lukaNkulunkulu kudinga ukuthi abantu babekezelele ubuhlungu obugedlisa amazinyo, futhi bakhokhe inani eliphezulu. Isemva kwalokhu kuphela lapho beyozuzwa khona nguNkulunkulu futhi bakwazi ukubuyisela uthando lwabo lweqiniso kuNkulunkulu, futhi ilapho kuphela inhliziyo kaNkulunkulu iyokwaneliseka khona. Uma abantu befisa ukupheleliswa nguNkulunkulu, futhi uma befisa ukwenza intando Yakhe, futhi banikele uthando lwabo ngokuphelele kuNkulunkulu, ngakho kufanele bezwe ubuhlungu obukhulu kanye nezinhlupheko eziningi ezivela ezimweni, ukuzwa ubuhlungu obudlula ukufa, ekugcineni bayophoqeleka ukuba banikeze inhliziyo yabo yeqiniso kuNkulunkulu. Noma umuntu umthanda ngeqiniso uNkulunkulu noma cha, kubonakala ngesikhathi sobunzima nokucwengwa. UNkulunkulu uyaluhlambulula uthando lwabantu, futhi nalokhu kwenzeka kuphela phakathi kobunzima nokucwengwa.
Kucashunwe embhalweni othi “Ukuthanda UNkulunkulu Kuphela Okuwukukholwa KuNkulunkulu Ngeqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Kucashunwe embhalweni othi “Ukuthola Ukucwengisiswa Kuphela Okungenza Umuntu Abe Nothando Lweqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Ekuphileni kwakhe, uPetru wabhekana nokucwengwa izikhathi ezingamakhulu futhi wabhekana nezinhlupheko eziningi ezibuhlungu. Lokhu kucwengwa kwaba yisisekelo sothando lwakhe olukhulukazi lukaNkulunkulu, futhi lokhu kwaba yinto ebalulekile empilweni yakhe yonke. Ukuthi wakwazi ukuba nalolu thando olukhulukazi lukaNkulunkulu empeleni, kolunye uhlangothi, kwaba ngenxa yokuphikelela kwakhe ethanda uNkulunkulu; okubaluleke kakhulu, kodwa-ke, kwaba ngenxa yokucwenga nokuhlupheka abhekana nakho. Lokhu kuhlupheka kwaba yisiqondiso saKhe endleleni yokuthanda uNkulunkulu, futhi kwaba yinto angazange ayikhohlwa. Uma abantu bengahlangabezani nobuhlungu bokucwengwa uma bethanda uNkulunkulu, lokho-ke kusho ukuthi uthando lwabo lugcwele ukungcola kanye nokuthandwa yibo; uthando olufana nalolu lugcwele imibono kaSathane, futhi nje alukwazi neze ukufeza intando kaNkulunkulu. Ukuba nothando oluphikelelayo lukaNkulunkulu akufani nokuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Yize noma konke abakucabangayo ezinhliziyweni zabo kungenxa yokuthanda uNkulunkulu, nokwenelisa uNkulunkulu, sengathi imicabango yabo ayinamicabango yabantu, sengathi konke abakwenzayo bakwenzela uNkulunkulu, uma imicabango yabo ilethwa phambi kukaNkulunkulu, imicabango enjalo ayinconywa noma ayibusiswanga nguNkulunkulu. Ngisho noma abantu sebeqondisise kahle wonke amaqiniso—uma sebewazi wonke—lokhu akukwazi ukubizwa ngophawu lokuthanda uNkulunkulu, angeke kuthiwe laba bantu ngempela bathanda uNkulunkulu. Ngisho noma sebeqondisise amaqiniso amaningi ngaphandle kokubhekana nokucwengwa, abantu abakwazi ukuphila ngala maqiniso; kungesikhathi sokucwengwa kuphela lapho abantu bengaqonda okushiwo ngempela yilawa maqiniso, yilapho kuphela lapho abantu bengakwazi ukwazisa ngempela incazelo yawo yangaphakathi. Ngaleso sikhathi, uma sebezama futhi, bayakwazi ukusebenzisa la maqiniso ngendlela, kanye nangokuhambisana nentando kaNkulunkulu; ngaleso sikhathi, imibono yabo yabantu iyancipha, ukukhohlakala kobuntu babo kuyehla, kanti nemizwa yabo yokuba umuntu iyashabalala; kungaleso sikhathi kuphela lapho ukwenza kwabo kuyisibonakaliso seqiniso sothando lukaNkulunkulu.
Lapho uNkulunkulu enza umsebenzi wokucwenga umuntu, umuntu uyahlupheka. Lapho ecwengisiswa ngokwengeziwe, ukuthanda kwakhe uNkulunkulu kuba kukhulu, futhi amandla amakhulu kaNkulunkulu ambulwa kuye ngokuthe xaxa. Lapho kuncipha ukucwengwa komuntu, kuyancipha ukuthanda kwakhe uNkulunkulu, futhi ayancipha namandla kaNkulunkulu embulwa kuye. Lapho kuba kukhulu ukucwengwa nobuhlungu bakhe nalapho kwanda ukuhlushwa kwakhe, kuyojula nakakhulu ukumthanda kwakhe ngempela uNkulunkulu, luyoba qotho nakakhulu ukholo lwakhe kuNkulunkulu, futhi lujule nakakhulu ulwazi lwakhe ngoNkulunkulu. Ezintweni ozodlula kuzo, uzobona ukuthi labo abadlula ekucwengweni nasebuhlungwini obukhulu lapho kubhekanwa nabo futhi beqondiswa kakhulu, futhi uzobona ukuthi yilabo bantu abamthanda ngokujulile uNkulunkulu, futhi abanolwazi olunzulu nolujula ngokwengeziwe ngoNkulunkulu. Labo abangakaze bezwe ukuthi kubhekanwe nabo kodwa abanolwazi olungatheni, bangathi kuphela: “UNkulunkulu muhle kakhulu, abantu ubanika umusa ukuze bamthokozele.” Uma abantu bezwe ukubhekanwa nabo nokuqondiswa, khona-ke bayokwazi ukukhuluma ngolwazi lwangempela ngoNkulunkulu. Ngakho lapho umsebenzi kaNkulunkulu umangalisa ngokwengeziwe kumuntu, uba yigugu futhi ubaluleke ngokwengeziwe. Lapho ungaqondakali ngokwengeziwe kuwe futhi ungahambisani nakakhulu nemibono yakho, umsebenzi kaNkulunkulu ukwazi ngokwengeziwe ukukunqoba, ukukuzuza, nokukuphelelisa. Ukubaluleka komsebenzi kaNkulunkulu kubanzi kakhulu! Ukube uNkulunkulu akamcwenganga ngale ndlela umuntu, ukube akasebenzanga ngale ndlela, khona-ke umsebenzi Wakhe ubungeke ube namiphumela futhi ubungeke ubaluleke. Kwashiwo esikhathini esedlule ukuthi uNkulunkulu wayezokhetha futhi azuze leli qembu, futhi aliphelelise ezinsukwini zokugcina; kulokhu, kukhona ukubaluleka okumangalisayo. Lapho uba mkhulu ngokwengeziwe umsebenzi awenza kini, kuyajula futhi kuhlanzeke ngokwengeziwe ukuthanda kwenu uNkulunkulu. Lapho uba mkhulu ngokwengeziwe umsebenzi kaNkulunkulu, umuntu ukwazi kakhulu ngokwengeziwe ukuzwa ukuhlakanipha Kwakhe futhi lujula ngokwengeziwe nolwazi lomuntu Ngaye.
Kucashunwe embhalweni othi “Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengwe Kuqala” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
UNkulunkulu angabaphelelisa abantu ohlangothini oluhle nolubi. Kuya ngokuthi uyakwazi yini ukubona, nokuthi ingabe uyafuna yini ukupheleliswa nguNkulunkulu. Uma ufuna ngempela ukupheleliswa nguNkulunkulu, izinto ezimbi ngeke zikwenze ulahlekelwe, kodwa zingakulethela izinto ezingokoqobo ngokwengeziwe, futhi zingakwenza wazi ngokwengeziwe ukuthi yini le oyintulayo kuwe ngaphakathi, ukwazi ngokwengeziwe ukuqonda izimo zakho ezingokoqobo, nokuthi ubone ukuthi umuntu akanalutho futhi akalutho; uma ungahlangabezani nokuvivinywa, awazi, futhi uzohlala uzwa sengathi ungaphezulu kwabanye futhi ungcono kunabo bonke abanye. Kukho konke lokhu uzobona ukuthi konke okukwehlele ngaphambilini kwakwenziwe nguNkulunkulu futhi kwavikelwa uNkulunkulu. Ukungena ekuvivinyweni kukushiya ungenalo uthando noma ukholo futhi ungakwazi ukuthandaza, ungakwazi nokucula amaculo, bese kuthi ngaphandle kokuqaphela, phakathi kwalokhu, ufinyelele ekubeni uzazi. UNkulunkulu unezindlela eziningi zokuphelelisa umuntu. Usebenzisa zonke izinhlobo zezimo ukuze abhekane nesimo sokukhohlakala kumuntu, asebenzise izinto ezehlukene ukuze abeke umuntu obala; kolulodwa uhlangothi ubhekana nomuntu; ngakolunye ubeka umuntu obala, kolunye wambula umuntu, agubhe futhi ambule “izimfihlakalo” ezisekujuleni kwenhliziyo yomuntu, akhombise umuntu imvelo yakhe ngokwambula izimo zakhe eziningi. UNkulunkulu uphelelisa umuntu ngezindlela eziningi—ngesambulo, ngokubhekana nomuntu, ngokumcwengisisa, nokumsola—ukuze umuntu akwazi ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu owenza ngokoqobo.
Kucashunwe embhalweni othi “Yilabo Kuphela Abagxila Ekwenzeni Abangapheleliswa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Okwedlule: 3. Ukubaluleka Komsebenzi KaNkulunkulu Wokwahlulela Nokusola
Okulandelayo: 5. Kufanele Ukholwe Kanjani KuNkulunkulu Ukuze Usindiswe futhi Upheleliswe?